ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ၄ အပြီး ပြောစရာ ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ အချက် ၁၀ ချက် - SPORTS MYANMAR
ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ၄ အပြီး ပြောစရာ ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ အချက် ၁၀ ချက်
ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်ဟာ ပွဲစဉ် ၄ ပွဲသာ ကစား ထားပြီး ဖြစ်ပေမယ့် ရင်းနှီးပြီးသာ ပုံပြင် တစ်ချို့ ကတော့ ကွဲကွဲပြားပြား ထွက်ပေါ် လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ ပထမ တစ်ပိုင်း အပြီး သိနားလည် ခဲ့တဲ့ အချက် ၁၀ ချက်ကို ယခုလိုပဲ ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။
၁~ ထပ်မံမြင်တွေ့ ရအုံးမယ့် နှစ်ကောင်တည်း ပြေးတဲ့ ပြိုင်ပွဲ
ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက လိုပဲ အမှတ်ပေးဖလား တိုက်ပွဲဟာ လီဗာပူး နဲ့ မန်စီးတီး တို့သာ အဓိက ပြိုင်ဆိုင် သွားရအုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ Top6အသင်းတွေ ကတော့ ချန်ပီယံလိဂ် ၀င်ခွင့် ရဖို့ အတွက်သာ အဓိက ပြိုင်ဆိုင် သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂~ အမြန်ဆုံး နိုးထဖို့ လိုနေပြီ ဖြစ်တဲ့ ဆိုးရှား
ရာသီအဖွင့်ပွဲစဉ်မှာ ချဲလ်ဆီးလို အသင်းကို ၄ ဂိုးပြတ်နဲ့ အနိုင်ယူခဲ့တာကြောင့် အိုလီဂန်နာဆိုးရှား ရဲ့ အသင်းကို အများကြီး မျှော်လင့် ထားမှုတွေ ရှိခဲ့ကြပေမယ့်လည်း ရာသီသစ်စပြီး တစ်လ မပြည့်မီမှာပဲ ဒီအတွေးတွေ ပြောင်းလဲ သွားခဲ့ကာ အသင်းအောင်မြင်မှု ရဖို့ အတွက် ဆိုးရှားကို အချိန်ပေးဖို့ လိုတယ်လို့ လေသံ ပြောင်းသွား ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နောက်ဆုံး ကစားခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲစုံ ၁၆ ပွဲမှာ ၃ ပွဲသာ အနိုင်ရထားတာကြောင့် သတိပေး ခေါင်းလောင်းကလည်း မြည်နေပါတယ်။
၃~ အခြေအနေကောင်းနေတဲ့ လက်စတာ
လက်စတာ ဟာ ဒီရာသီ ရဲ့ အကောင်းဆုံး ဖျက်မြင်း ဖြစ်လာဖို့ ရှိနေပြီး Top4အတွက် မဟုတ်ရင်တောင် Top6ထဲကို ၀င်ရောက်နိုင်တဲ့ အလားအလာ ရှိနေပါတယ်။ ဂျေမီဗာဒီကလည်း ဒီရာသီမှာ ပုံစံကောင်း ရနေတဲ့ အပြင် ဂိုးသွင်းခြေစွမ်း ကလည်း ထက်မြက်နေပြီး ပြိုင်ဘက်နောက်ခံလူတွေ အတွက် အန္တရာယ် ပါပဲ။ မန်နေဂျာ ဘရန်ဒန်ရော်ဂျာဟာ ရှိတဲ့လူတွေကို အကောင်းဆုံး ပေါင်းစပ် ထားနိုင်ခဲ့ပြီး မြေခွေးပြာ တို့ရဲ့ ရှုံးပွဲမရှိ မှတ်တမ်းဟာ ကံကောင်းပြီး ရတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
၄~ ပေါ့ပေါ့တန်တန် သဘောမထား သင့်တဲ့ ရှက်ဖီး
လူတော်တော်များများ ကတော့ ကစားသမား အပြောင်းအရွေ့ ကြီးကြီးမားမား မလုပ်ထားတဲ့ ရှက်ဖီးယူနိုက်တက်ကို ဒီရာသီ တန်းဆင်းရဖို့ ရေပန်း အစားဆုံး အသင်းလို့ သတ်မှတ် ခဲ့ကြပေမယ့်လည်း ရှက်ဖီးဟာ ပေါ့ပေါ့တွေးလို့ မရတဲ့ အသင်းဆိုတာကို ပြသနေပါတယ်။ ဆန်းသစ်တဲ့ overlapping center backs ဗျူဟာ နဲ့ ခရစ်ဝိုင်ဒါရဲ့ အသင်း ဘယ်လောက် ကောင်းအောင် ကစားနေသလဲ ဆိုတာ ချဲလ်ဆီး နဲ့ပွဲကို ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။
၅~ ဗီလာနဲ့ နော့ဝှစ်တို့ ပွဲကျပ်ကာလကို တောင့်ခံ နိုင်မလား?
တန်းတက် ၃ သင်းစလုံးဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ တာထွက်တွေကို ရရှိနေပါတယ်။ သမိုင်းကြောင်းကြီးတဲ့ ဗီလာကို ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ပြန်မြင်ရတာ ကောင်းမွန်လှပြီး နော့ဝှစ်ကလည်း ကိုယ့်မူအတိုင်း ကိုယ်သွား နေပါတယ်။ ဆောင်းရာသီ ပွဲကျပ်ကာလတွေကို ဒီအသင်းတွေ ကောင်းကောင်း ဖြတ်ကျော် နိုင်မလား ဆိုတာ စောင့်ကြည့် ရမှာ ဖြစ်ပြီး ဒီအသင်းတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ ကတော့ အားရစရာ ပါပဲ။
၆~ ၀ုဖ်ကို ဒုက္ခပေးသွားနိုင်တဲ့ ယူရိုပါလိဂ်
၀ုဖ်အသင်း အနေနဲ့ ယူရိုပါလိဂ် နဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ကြား ဟန်ချက်ညီအောင် ကစားနိုင်ဖို့ မလွယ်ကူပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ် ရဲ့ အဆင့် ၇ နေရာမှာ ရပ်တည် ခဲ့တဲ့ ၀ုဖ်အနေနဲ့ ကြားရက်မှာ ဥရောပပွဲတွေ ကစားအပြီး လိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ ရမှတ်တွေ အများကြီး စုဆောင်း နိုင်ဖို့ မလွယ်ကူ ပါဘူး။
၇~ မှေးမှိန်နေတဲ့ စပါးရဲ့ ဖလားမျှော်လင့်ချက်
လာမည့် ဇန်န၀ါရီမှာ အဲရစ်ဆင်ကိုသာ ထိန်းမထား နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင် စပါး အနေနဲ့ ဒီရာသီ Top4၀င်ဖို့တောင် မသေချာပါဘူး။ အစီအစဉ် တင်ဆက်သူ တစ်ယောက် ကတော့ အဲရစ်ဆင် အနေနဲ့ အသင်းကြီး တစ်သင်းကို ပြောင်းတာထက်စာရင် စပါးမှာ ဆက်နေတာက ဖလား ရဖို့ ပိုမို အခွင့်အရေး ရှိတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စပါးတို့ နောက်ဆုံး ဖလားရတာ ဘယ်အချိန်ကလဲ? အတော်ကို ကြာနေပါပြီ။
၈~ Top6အတွက် အခွင့်အရေး ရှိနေတဲ့ အဲဗာတန်
အဲဗာတန်ဟာ ဥရောပ မျှော်လင့်ချက် အတွက် တကယ့် အခွင့်အရေး ရှိနေပါတယ်။ လက်ရှိ အဲဗာတန် ရဲ့ လူအင်အား နဲ့ ကစားပုံအရ မာကိုဆေးလ်ဗားရဲ့ အသင်း အနေနဲ့ Top6တစ်နေရာစာ အတွက် မန်ယူနိုက်တက် ၊ အာဆင်နယ် ၊ ချဲလ်ဆီး ၊ စပါး ၊ လက်စတာ တို့နဲ့ အပြိုင် ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
၉~ ဟယ်လာလို တိုက်စစ်မှုးကောင်း ခေါ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ၀က်ဟမ်း
၀က်ဟမ်း အသင်းရဲ့ မှားယွင်းတဲ့ ကစားသမား ခေါ်ယူမှုတွေကို အားလုံး မြင်တွေ့ ခဲ့ဖူးမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ပေါင် ၄၅သန်းတန် တိုက်စစ်မှုး ဆီဘက်စတီယန်ဟယ်လာ ကတော့ အခြား အလယ်အလတ် အသင်းတွေက တိုက်စစ်မှုးတွေနဲ့ မတူ တစ်ရာသီ ဂိုး ၂၀ လောက် အာမခံချက် ပေးနိုင်တဲ့ ကစားသမား ဖြစ်ပါတယ်။
၁၀~ ကာလတစ်ခုကြာ ချဲလ်ဆီးကို တည်ဆောက်သွားရအုံးမယ့် လမ်းပတ်
ဒီရာသီ အဆင့်ဘယ်လောက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ချဲလ်ဆီး အသင်းဟာ မန်နေဂျာသစ် ဖရန့်လမ်းပတ်ရဲ့ လက်အောက်မှာ အနာဂတ် အတွက် အလားအလာ ဘယ်လောက် ရှိသလဲ ဆိုတာ ပြသ ထားပါတယ်။ မေဆင်မောင့် ၊ အေဗရာဟမ် တို့ကလည်း လမ်းပတ်ရဲ့ ယုံကြည်မှုကို အကောင်းဆုံး ပြန်လည် တုန့်ပြန်ကာ PL အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်း ရယူ နေပါတယ်။ အကယ်၍ လမ်းပတ် အနေနဲ့ ဒီရာသီ ရမှတ်များများ မရယူနိုင်ခဲ့ဘူး ဆိုရင်တောင် မောင့် ၊ အေဗရာဟမ် တို့ကို စင်တင်နိုင်တာ ကတော့ တကယ့် အမြတ်ပါပဲ။
ပရီးမီးယားလိဂျ ပှဲစဉျ ၄ အပွီး ပွောစရာ ဖွဈလာခဲ့တဲ့ အခကျြ ၁၀ ခကျြ
ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျဟာ ပှဲစဉျ ၄ ပှဲသာ ကစား ထားပွီး ဖွဈပမေယျ့ ရငျးနှီးပွီးသာ ပုံပွငျ တဈခြို့ ကတော့ ကှဲကှဲပွားပွား ထှကျပျေါ လာခဲ့ပါတယျ။ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျရဲ့ ပထမ တဈပိုငျး အပွီး သိနားလညျ ခဲ့တဲ့ အခကျြ ၁၀ ခကျြကို ယခုလိုပဲ ဖျောပွ ပေးလိုကျပါတယျ။
၁~ ထပျမံမွငျတှေ့ ရအုံးမယျ့ နှဈကောငျတညျး ပွေးတဲ့ ပွိုငျပှဲ
ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီက လိုပဲ အမှတျပေးဖလား တိုကျပှဲဟာ လီဗာပူး နဲ့ မနျစီးတီး တို့သာ အဓိက ပွိုငျဆိုငျ သှားရအုံးမှာ ဖွဈပါတယျ။ ကနျြတဲ့ Top6အသငျးတှေ ကတော့ ခနျြပီယံလိဂျ ၀ငျခှငျ့ ရဖို့ အတှကျသာ အဓိက ပွိုငျဆိုငျ သှားရမှာ ဖွဈပါတယျ။
၂~ အမွနျဆုံး နိုးထဖို့ လိုနပွေီ ဖွဈတဲ့ ဆိုးရှား
ရာသီအဖှငျ့ပှဲစဉျမှာ ခြဲလျဆီးလို အသငျးကို ၄ ဂိုးပွတျနဲ့ အနျိုငျယူခဲ့တာကွောငျ့ အိုလီဂနျနာဆိုးရှား ရဲ့ အသငျးကို အမြားကွီး မြှျောလငျ့ ထားမှုတှေ ရှိခဲ့ကွပမေယျ့လညျး ရာသီသဈစပွီး တဈလ မပွညျ့မီမှာပဲ ဒီအတှေးတှေ ပွောငျးလဲ သှားခဲ့ကာ အသငျးအောငျမွငျမှု ရဖို့ အတှကျ ဆိုးရှားကို အခြိနျပေးဖို့ လိုတယျလို့ လသေံ ပွောငျးသှား ခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ နောကျဆုံး ကစားခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲစုံ ၁၆ ပှဲမှာ ၃ ပှဲသာ အနိုငျရထားတာကွောငျ့ သတိပေး ခေါငျးလောငျးကလညျး မွညျနပေါတယျ။
၃~ အခွအေနကေောငျးနတေဲ့ လကျစတာ
လကျစတာ ဟာ ဒီရာသီ ရဲ့ အကောငျးဆုံး ဖကျြမွငျး ဖွဈလာဖို့ ရှိနပွေီး Top4အတှကျ မဟုတျရငျတောငျ Top6ထဲကို ၀ငျရောကျနိုငျတဲ့ အလားအလာ ရှိနပေါတယျ။ ဂမြေီဗာဒီကလညျး ဒီရာသီမှာ ပုံစံကောငျး ရနတေဲ့ အပွငျ ဂိုးသှငျးခွစှေမျး ကလညျး ထကျမွကျနပွေီး ပွိုငျဘကျနောကျခံလူတှေ အတှကျ အန်တရာယျ ပါပဲ။ မနျနဂြော ဘရနျဒနျရျောဂြာဟာ ရှိတဲ့လူတှကေို အကောငျးဆုံး ပေါငျးစပျ ထားနိုငျခဲ့ပွီး မွခှေေးပွာ တို့ရဲ့ ရှုံးပှဲမရှိ မှတျတမျးဟာ ကံကောငျးပွီး ရတာတော့ မဟုတျပါဘူး။
၄~ ပေါ့ပေါ့တနျတနျ သဘောမထား သငျ့တဲ့ ရှကျဖီး
လူတျောတျောမြားမြား ကတော့ ကစားသမား အပွောငျးအရှေ့ ကွီးကွီးမားမား မလုပျထားတဲ့ ရှကျဖီးယူနိုကျတကျကို ဒီရာသီ တနျးဆငျးရဖို့ ရပေနျး အစားဆုံး အသငျးလို့ သတျမှတျ ခဲ့ကွပမေယျ့လညျး ရှကျဖီးဟာ ပေါ့ပေါ့တှေးလို့ မရတဲ့ အသငျးဆိုတာကို ပွသနပေါတယျ။ ဆနျးသဈတဲ့ overlapping center backs ဗြူဟာ နဲ့ ခရဈဝိုငျဒါရဲ့ အသငျး ဘယျလောကျ ကောငျးအောငျ ကစားနသေလဲ ဆိုတာ ခြဲလျဆီး နဲ့ပှဲကို ကွညျ့ရငျ သိနျိုငျပါတယျ။
၅~ ဗီလာနဲ့ နော့ဝှဈတို့ ပှဲကပျြကာလကို တောငျ့ခံ နိုငျမလား?
တနျးတကျ ၃ သငျးစလုံးဟာ ကောငျးမှနျတဲ့ တာထှကျတှကေို ရရှိနပေါတယျ။ သမိုငျးကွောငျးကွီးတဲ့ ဗီလာကို ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ပွနျမွငျရတာ ကောငျးမှနျလှပွီး နော့ဝှဈကလညျး ကိုယျ့မူအတိုငျး ကိုယျသှား နပေါတယျ။ ဆောငျးရာသီ ပှဲကပျြကာလတှကေို ဒီအသငျးတှေ ကောငျးကောငျး ဖွတျကြျော နိုငျမလား ဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ ရမှာ ဖွဈပွီး ဒီအသငျးတှရေဲ့ စိတျဓာတျတှေ ကတော့ အားရစရာ ပါပဲ။
၆~ ၀ုဖျကို ဒုက်ခပေးသှားနိုငျတဲ့ ယူရိုပါလိဂျ
၀ုဖျအသငျး အနနေဲ့ ယူရိုပါလိဂျ နဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျကွား ဟနျခကျြညီအောငျ ကစားနိုငျဖို့ မလှယျကူပါဘူး။ ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျ ရဲ့ အဆငျ့ ရ နရောမှာ ရပျတညျ ခဲ့တဲ့ ၀ုဖျအနနေဲ့ ကွားရကျမှာ ဥရောပပှဲတှေ ကစားအပွီး လိဂျပွိုငျပှဲမှာ ရမှတျတှေ အမြားကွီး စုဆောငျး နိုငျဖို့ မလှယျကူ ပါဘူး။
၇~ မှေးမှိနျနတေဲ့ စပါးရဲ့ ဖလားမြှျောလငျ့ခကျြ
လာမညျ့ ဇနျနဝါရီမှာ အဲရဈဆငျကိုသာ ထိနျးမထား နိုငျခဲ့ဘူးဆိုရငျ စပါး အနနေဲ့ ဒီရာသီ Top4၀ငျဖို့တောငျ မသခြောပါဘူး။ အစီအစဉျ တငျဆကျသူ တဈယောကျ ကတော့ အဲရဈဆငျ အနနေဲ့ အသငျးကွီး တဈသငျးကို ပွောငျးတာထကျစာရငျ စပါးမှာ ဆကျနတောက ဖလား ရဖို့ ပိုမို အခှငျ့အရေး ရှိတယျလို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ စပါးတို့ နောကျဆုံး ဖလားရတာ ဘယျအခြိနျကလဲ? အတျောကို ကွာနပေါပွီ။
၈~ Top6အတှကျ အခှငျ့အရေး ရှိနတေဲ့ အဲဗာတနျ
အဲဗာတနျဟာ ဥရောပ မြှျောလငျ့ခကျြ အတှကျ တကယျ့ အခှငျ့အရေး ရှိနပေါတယျ။ လကျရှိ အဲဗာတနျ ရဲ့ လူအငျအား နဲ့ ကစားပုံအရ မာကိုဆေးလျဗားရဲ့ အသငျး အနနေဲ့ Top6တဈနရောစာ အတှကျ မနျယူနျိုကျတကျ ၊ အာဆငျနယျ ၊ ခြဲလျဆီး ၊ စပါး ၊ လကျစတာ တို့နဲ့ အပွိုငျ ဖွဈသငျ့ပါတယျ။
၉~ ဟယျလာလို တိုကျစဈမှုးကောငျး ချေါနျိုငျခဲ့တဲ့ ၀ကျဟမျး
၀ကျဟမျး အသငျးရဲ့ မှားယှငျးတဲ့ ကစားသမား ချေါယူမှုတှကေို အားလုံး မွငျတှေ့ ခဲ့ဖူးမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ ပေါငျ ၄၅သနျးတနျ တိုကျစဈမှုး ဆီဘကျစတီယနျဟယျလာ ကတော့ အခွား အလယျအလတျ အသငျးတှကေ တိုကျစဈမှုးတှနေဲ့ မတူ တဈရာသီ ဂိုး ၂၀ လောကျ အာမခံခကျြ ပေးနိုငျတဲ့ ကစားသမား ဖွဈပါတယျ။
၁၀~ ကာလတဈခုကွာ ခြဲလျဆီးကို တညျဆောကျသှားရအုံးမယျ့ လမျးပတျ
ဒီရာသီ အဆငျ့ဘယျလောကျပဲ ဖွဈဖွဈ ခြဲလျဆီး အသငျးဟာ မနျနဂြောသဈ ဖရနျ့လမျးပတျရဲ့ လကျအောကျမှာ အနာဂတျ အတှကျ အလားအလာ ဘယျလောကျ ရှိသလဲ ဆိုတာ ပွသ ထားပါတယျ။ မဆေငျမောငျ့ ၊ အဗေရာဟမျ တို့ကလညျး လမျးပတျရဲ့ ယုံကွညျမှုကို အကောငျးဆုံး ပွနျလညျ တုနျ့ပွနျကာ PL အတှအေ့ကွုံတှကေိုလညျး ရယူ နပေါတယျ။ အကယျ၍ လမျးပတျ အနနေဲ့ ဒီရာသီ ရမှတျမြားမြား မရယူနိုငျခဲ့ဘူး ဆိုရငျတောငျ မောငျ့ ၊ အဗေရာဟမျ တို့ကို စငျတငျနိုငျတာ ကတော့ တကယျ့ အမွတျပါပဲ။